Fomba Fampiasana Hakan-doha amin'ny vatana | Vahaolana OMG
Fomba fampiasan-dàlana amin'ny vatana amin'ny vatana
BWCs dia fitaovana fandraisam-peo natao hanaovana ny fanamiana ofisialin'ny tompon'andraikitra amin'ny alàlan'ny lalàna, izay afaka mampiditra solomaso na satroka miaro. Manome rakipeo haino aman-jery midadasika amin'ny fomba fijery manampahefana iray izy ireo rehefa manakaiky ny adidiny isan'andro ny tompon'andraikitra. Ireo sary avo lenta kendrena dia mandinika fomba fijery tsy azo diso momba ny olona ary mety amin'ny fanaovana fandaharana fanadihadiana amin'ny video, ohatra, ny fanekena ny tarehy. Ny amplifier dia mety ho marefo ka tsy ny feo mifandraika amin'ny toe-javatra ifantohana ihany no miampy feo manarona izay mety hampiditra ny fifanakalozan-kevitry ny mpijery.
Ny fanavaozana BWC dia miresaka fitomboan'ny fahasarotana hatramin'ny fanombohan'ny fakantsary raikitra, raha ny rafitra CCTV dia fehezin'ny ankamaroan'ny olona ary afaka mirakitra sary fotsiny fa tsy maneno. Nanodidina izany dia nisy toeram-piasana mpiaro ny fiarovana kanadiana isan-karazany nanome lalàna momba ny fanaraha-maso horonantsary ho an'ny fizarana misokatra, izay naseho tamin'ny faran'ity tatitra ity. Na dia mitohy toy ny teo aza ny fenitra fiarovana lehibe momba ny fandinihan-dahatsary, dia miha be pitsiny kokoa ny tany ankehitriny. Rehefa mivoatra ny fandrosoana amin'ny fandinihana, ny habetsaky ny angona isam-batan'olona (na ny horonan-tsary na ny feo) dia voangona amina toe-javatra miandalana (na static na portable) miaraka amin'ny fahafaha-mifamatotra amin'ireo data hafa (ohatra ny fanekena ny tarehy, metadata). Rariny raha mila mieritreritra momba ny fampiasana fanavaozana vaovao ny LEA mba hanampiana azy ireo amin'ny filalaovana ny adidiny. Mandritra izany fotoana izany, na eo aza izany, ny fanavaozana BWC dia manolotra fihenan-tena marina ho an'ny zon'ny olona fiarovana. Ekenay fa ny firosoana amin'ny fandinihana ny fandriam-pahalemana hatramin'ny voalohany dia ahafahana manao fampitoviana sahaza eo amin'ny fitakiana fampiharana ny lalàna sy ireo tombontsoan'ny fiarovana ny olona.
Tsy maintsy misy ny fanamafisan-tena miharihary fa ny programa BWC dia natao hamahana. Inona no zavatra ilain'ny LEA fanandramana misy ny BWC?
Ny BWC dia tsy tokony ho raisina am-pahamehana raha ny fahitana azy ho fitaovana ilaina fanta-daza. Tokony hapetraka amin'ny fitsarana izy ireo momba ny zava-dehibe mba hamahana ny fomba fiasa mazava ao an-toerana izay ampitovina azy ireo.
Azo omena valiny mahomby ve ny BWCs amin'ny valin'ny fandidiana efa navahana? Ny LEA dia tokony hahatsapa ny famerana ny fanavaozana. Ny ampahany amin'ireo andiany dia mety hivoaka amin'ny fakantsary, ny kaonty feo dia mety tsy ampy satria ny fisian'ny fifandirana na ny fikorontanana fototra, na ny fahadisoan'ny olombelona dia mety hanakana ny fahantrana sy ny fihenan'izy ireo. Raha sanatria ka hampiasaina ny kaonty ho porofon'ny fitsaram-pitsarana, ny LEA dia tokony handinika ny fepetra ilaina eken'ny Courts amin'ny fandeferana ny fizarana toy ny porofo sahala amin'ny fanangonana sy ny fepetra fikojakojana natolotra mba hiantohana ireo zavatra ilaina ireo.
Tsy isalasalana fa ny fampiasana ny BWC dia hitondra fiarovana very satria ny hetsika sy ny fifanakalozan-kevitry ny olona dia miaro tena tsy azo ihodivirana. Noho izany, ny fiatoana fiarovana rehetra dia tsy maintsy voafetra amin'ny ambaratonga azo tsapain-tanana sy azo ampifandanjana amin'ny tombony mendrika homarihina sy azo ambara. Miaraka amin'ny fanavaozana vaovao, dia mety ho sarotra ny maminavina ny vokadratsin'ny vokatra tsara sy ratsy ho an'ny takiana andavanandro sy ny tambajotra atolotra. Ny fandraisana an-tanana ny fizotran'ny pilot dia faritana lalina ho toy ny fomba iraisana amin'ny fanombanana ny fiatraikan'ny fiarovana ny BWC mifandraika amin'ny tombotsoany, alohan'ny hisafidianana na handefasana azy ireo, amin'ny fomba feno, ary amin'ny fepetra manao ahoana.
Ny fiarovana ny mpiasa dia tokony hojerena koa. Ny BWC dia afaka misambotra ireo manampahefana manome alàlana ny lalàna manakaiky ny angon-drakitra an-trano, izay azo antoka eo ambanin'ny lalàna momba ny fiarovana ny faritra malalaka. Ireo faritany manan-kery misy ahiahy dia mampiditra ny kaonty BWC hanampiana ny fanombanana ny fanatanterahana ny mpiasa. Ny solontena dia mety manana zon'ny fiarovana ihany koa, araky ny lalàna samihafa sy ny fahazoana mitambatra izay mety hisy fiantraikany amin'ny programa BWC.
Raha tsy izany dia azo averina ny fampiasana ny kaonty noho ny antony rehetra izay mahasoa amin'ny fotokevitry ny programa BWC, ohatra, ny fanomanana ofisialy, fikarohana, na fanombanana amin'ny fanatanterahana, dia tokony hojerena ireo tanjon'ny fanampiana ireo mba hiantohana ny tsy miova amin'ny fampiharana ara-nofo, ary ny solontena dia tokony manodidina ny nahita fianarana momba azy ireo. Toy izany koa, ny fepetra tokony hapetraka mba hamehezana ny fiarovana, ohatra, ny fijerena ny endrika sy ny fanavahana fanavahana, ary ny sakana ny fizotry ny saro-pady.
Ny fisaintsainana momba ny fanatanterahana fandaharan'asa BWC dia misavoritaka, ary ny hetsika mpanamory dia voatondro ho toy ny antena taloha ho amin'ny fandraisana an-tanana lavitra. Matetika be ny fomba fanao rehefa mandefa fandrosoana vaovao, hanomezana basy azy ireo eny an-tsaha amin'ny toerana voafetra. Raha sanatria ka misafidy ny LEA iray mifikitra amin'ny BWC dia mety, dia ny fampirantiana mpanamory fiaramanidina dia hampiseho ny fomba tena hanatontosana ny BWC amin'ny toe-javatra manokana azy ireo ary na izany fanavaozana izany dia mamokatra valiny mahasoa izay mahatratra ny tanjon'ny programa. Ny orinasa mpanamory fiaramanidina dia afaka manabe ny famoronana ihany koa mikasika ny firafitry ny fomba tsy azo soso-kevitra, ny fanomanana ilaina ary ny fanaraha-maso ilaina.
Fitantanana sy fandraisana andraikitra:
Ny fomba fangatahana hevitra momba ny fampitana ny BWC, ao anatin'izany ny tanjon'ny programa sy ny filàna miasa.
Ireo manam-pahaizana momba ny fitantanan-draharaha ho amin'ny fanangonana angon-drakitra tsirairay eo ambanin'ny programa.
Asa sy adidin'ny mpiasa amin'ny fanajana ny BWC sy ny tantaran'izy ireo.
Fitsipi-pitenenana hametrahana ny firaketana an-tsoratra tsy mijanona mazava ary hanodina sy hanodina ny BWCs, arakaraka izany.
Fandaharana ho an'ny mpitari-dàlana fikarakarana sy fiomanana amin'ny solontena hiantohana fa azon'ny manampahefana mahatakatra ny fahitana ny fiarovana BWC ary mahafantatra ny adidiny eo ambanin'ireo paikady sy teknika ireo.
Ny fiantohana fiarovana ho an'ny solontena izay tratran'ny BWCs ny angonin'izy ireo manokana.
Ny fanomezana ny adidy momba ny fiantohana fa ny fikarakarana sy ny teknika BWC dia arahin'izy ireo, ary miaraka amin'ny andraikitra lehibe no miorina amin'ny lehiben'ny fikambanana.
Ny valin'ny tsy momba ny fomba sy ny rafitra.
Tombontsoa ho an'ny olona amin'ny drafi-pandaminana. Tokony hampianarina ny olona fa manana tombontsoa handefa fanontaniana amin'ny maso i LEA momba ny fitantanana ny tantara misy ny angon-drakitry ny tsirairay hanapahana hevitra raha nisy ny fandikana ny lalàna fiarovana.
Ny ilana fifanarahana misy eo amin'ny LEA sy ny orinasa manam-pahaizana manokana avy any ivelany no mamaritra fa ny fotoana dia mijanona amin'ny fifehezana ny LEA ary miankina amin'ny lalàna miaro ny harena.
Fandaharana ho an'ny fandinihana anatiny mahazatra ny programa BWC hamahana ny tsy miova amin'ny paikady, paikady ary lalàna fiarovana ara-nofo. Ny famerenana dia tokony hampiditra fanadihadiana momba ny hoe ny fanaraha-maso BWC dia miaro ny fanentanana raha jerena ny antony manosika ao ambadik'ilay programa.
Ao anaty paikady PIA, fandaharana ho an'ny PIA amin'ny fotoana rehetra misy fanitsiana lehibe amin'ny fandaharana.
Ny anarana sy ny angon-drakitra mifandray amin'ny olona iray izay afaka mihetsika amin'ny fanontaniana amin'ny ankapobeny.
Fampiasana sy fampahafantarana rakitsoratra:
Ireo toe-javatra izay ahitana ny vanim-potoana. Ny fanadihadiana dia tokony hitranga amin'ny sehatra mila fahalalana fotsiny. Raha tsy misy fisalasalana fa nisy ny heloka bevava nitranga ary tsy nisy fitakiana ny fanaovan-dratsy, tsy tokony ho jerena ny tantara.
Ny antony ahafahana mampiasa ny kaonty sy ny fepetra manara-penitra na fitsipi-pifehezana, ohatra, dia manakana ny zavatra mivaingana avy amin'ireo vanim-potoana ampiasaina amin'ny fanomanana tanjona.
Ny fetra voafaritry ny fampiasana video sy ny fizahana feo.
Ireo toe-javatra izay ampahafantarina ny kaonty amin'ny olona amin'ny ankapobeny, amin'ny fiheverana an'izay, sy ny tarehimarika momba izany fanambarana izany. Ohatra, ny endrika sy ny toetran'ny olona avy any ivelany dia tokony ho takona ary hatsahatra ny feo isaky ny mety.
Ireo toe-javatra azo ampiharina amin'ny alàlan'ny fikambanana, ohatra, amin'ireo biraon'ny governemanta amin'ny fizahana fiasa, na amin'ireo solontena ara-dalàna ho singa amin'ny fizotry ny fitsaràna.
Fiarovana sy valin'ny famoretana:
Ireo fiarovana fiarovana dia ampiasaina hiantohana fa ny kaonty tsy azo atao na novaina araka ny tokony ho izy.
Fomba fitantanana ny fihenam-bidy izay mahazo ny angon-drakitra tsirairay tsy ankatoavina na tsy hita izay manohitra ny fandaminana ny lalàna miaro.
Fidirana amin'ny firaketana an-tsoratra:
Fomba fanao amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny fangatahana fidirana amin'ny tantara, ao anatin'izany ny fidirana amin'ny angon-drakitry ny tsirairay sy ny fahazoana miditra amin'ny fangatahana angon-drakitra ambanin'ny fahafahan'ny lalàna momba ny angon-drakitra, toy ny fangatahan'ny olona ny fanitsiana ny angon-drakitra manokana. Io dia mampiditra ny anarana sy ny angon-drakitra ifandraisan'ny olona izay tokony hampifanarahana ny fangatahana fidirana ao aminy.
Fihazonana sy fanimbana firaketana an-tsoratra:
Fotoana fihazonana sy ny fitsinjarana
Ireo fomba fiasa sy fomba ireo dia tokony hampiasaina amin'ny besinimaro mba hampandroso ny fahamarinana sy ny andraikitra. Ny fampirantiana ampahibemaso fa misy ny paikady sy ny fomba ary tompon'andraikitra amin'ny famotorana azy ireo ny tompon'andraikitra dia tena ilaina mba hiantohana ny zon'ny fiarovana ny vahoaka
voamarina tsara. Tokony ho taratry ny fanadinadinana momba ny fifaneraserana sy ny fanoloran-tena ihany koa ny antontan-taratasy, toy ny fahatakarana ny fahatsapana ara-tsosialy.
Ny BWC dia tsy mirakitra ny hetsika sy ny lahatenin'ny olona iray fotsiny, fa ankoatra ny fifandraisan'ny olona amin'ny hafa ao anaty tantara mitohy, ao anatin'izany ny namana, havana, mpijery, olona voarohirohy sy ahiahiana. Ny kaontin'ny olona mampiasa BWC dia miteraka loza manan-danja amin'ny fiarovana tokana, ary ny LEA dia tsy maintsy mifantoka amin'ny fandefasana BWC fotsiny amin'ny diplaoma ary amin'ny fomba mifandraika sy miantoka ny zon'ny mponina amin'ny ankapobeny sy ny zon'ny mpiasa hiaro azy ireo.
Fomba fampiasan-dàlana amin'ny vatana amin'ny vatana no farany niova: Desambra 4th, 2019 by Admin
3802 Total Views 1 Views Today